Somaliland Maxay Bishii August Kaga Duwanayd Dunida? • Oodweynenews.com Oodweyne News
Somaliland Maxay Bishii August Kaga Duwanayd Dunida?
Mid ka mid ah goobaha magaalada Hargeysa ee bunka lagu cabbo ayaan toddobaadkan kula kulmay oday u dhashay qowmiyadaha degan dalka Itoobiya oo muddo 15 sannadood ah aanaan is arag. Salaan, sheeko iyo laba koob oo bun ah ka bacdi, wuxuu igu yidhi “ma iga rumaysanaysaa intaan Somaliland ka maqnaa oo haatan dhawr iyo toban sanno ah, inaan had iyo jeer ku fikiri jiray dadkii aan Somaliland isku barannay.”
Faysal waxa uu xusuusiyey Jaaliyadda in cadowga Somaliland ee hadba hab cusub isku dayaya inuu ku soo weeraro inuu haatana mid diineed isku dayey. Qurbajoogana laga filayo inay qarannimada Somaliland difaacaan, isla markaana albaab kasta u garaacaan si qaddiyaddeenna loo gaadho.